China Wood Screws Manufacture and Factory | Zhanyu
· Fenitra: DIN / ASTM
· Size: m6-m12
· Fahaiza-mamatsy: 200 taonina isam-bolana
· Fotoana santionany ： 3-5days
· Fomba fandoavam-bola: T / T, L / C
Ny visy hazo, fantatra ihany koa amin'ny hoe visy hazo, dia mitovy amin'ny visy milina, fa ny kofehy visy kosa dia kofehy vita amin'ny hazo manokana, azo aforitra mivantana ho singa hazo (na ampahany) hampifandray ny vy (na tsy vy) miaraka amina lavaka misy singa hazo. Io karazana fifandraisana io koa tsy azo esorina.
Ny tombony azo avy amin'ny visy hazo dia ny fananana hery fanamafisana matanjaka noho ny famantsihana, ary azo esorina sy soloina, izay tsy manimba ny tampon'ny hazo ary mety kokoa ampiasaina.
Ny karazana visy hazo dia vy sy varahina. Raha ny lohan'ny fantsika dia azo zaraina ho karazana loha boribory izy ireo, karazana lohan-doha ary karazana loha lava lavalava. Ny lohan'ny fantsika dia azo zaraina ho visy miendrika slott ary visy vaky. Amin'ny ankapobeny, ny vodi-loha boribory dia vita amin'ny vy malefaka ary manga. Voalamina ny vodin-doha fisaka. Ny vodin-doha boribory dia mazàna nopetahany cadmium sy chromium. Matetika izy io dia ampiasaina mba hametrahana ravina malalaka, farango ary kojakojam-pitaovana hafa. Ny famaritana dia mamaritra ny savaivony sy ny halavan'ny tsorakazo sy ny karazana lohan'ny fantsika. Ny boaty no singa fividianana.
Misy karazany roa ny vodi-biriky fametahana visy hazo, ny iray mahitsy ary ny iray hafa miampita, izay mety amin'ny endrik'ilay alitara lohan'ny visy hazo. Ho fanampin'izany, misy mpamily manokana napetraka eo amin'ny tsipika fandoroana tsipìka, izay mety amin'ny famoahana sy famoahana visy hazo lehibe kokoa. Mety sy mitsitsy asa.
Teo aloha: Hex lohan'ny fandavahana tena
Manaraka: Bolt mitondra
Sina handan hebei famatsiana vatofantsika beton Drop -...